ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): အိမ်ထောင်ရေးသုခ မပြည့်ဝတဲ့ အခါ နာကျင်တဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်ပေါ်စေ ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): အိမ်ထောင်ရေးသုခ မပြည့်ဝတဲ့ အခါ နာကျင်တဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်ပေါ်စေ
အိမ်ထောင်ရေးသုခ မပြည့်ဝတဲ့ အခါ နာကျင်တဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်ပေါ်စေ
သင်ဟာ ဒါကို လိင်ဆက်ဆံ တယ်ပဲ ခေါ်ခေါ် ၊ ချစ်တင်းနှော တယ်ပဲ ခေါ်ခေါ် ဒီလို ကိစ္စရပ်မှာ ဘာတွေ ပါဝင်တယ် ဆိုတာကိုတော့ အကျယ် တ၀င့်ရှင်းပြနေဖို့ မလိုတော့ ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ချစ်တင်းနှော ခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြောင်းလဲမှုတွေ ဘယ်လို ဖြစ်စေနိုင် တာလဲ?
ဒါ့အပြင် အိမ်ထောင်ရေးသုခ မပြည့်ဝခြင်းဟာ ဘာကြောင့် နာကျင်တဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်ရတာလဲ?
ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာ သာယာကြည်နူးမှု ၊ ပျော်ရွှင်မှု နဲ့ သံယောဇဉ် ဖြစ်တည်မှုတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် ဟော်မုန်းတစ်မျိုးကို ကြွယ်ဝစွာ ထုတ်လုပ်ထွက်ပေါ်လာစေတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
လေ့လာမှုများစွာက တဆင့် တွေ့ရှိလာခဲ့တာကတော့ ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာ နှလုံးရောဂါ နဲ့ အရိုးပွ ရောဂါတို့ ဖြစ်ပွားခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ချစ်တင်းနှောနေစဉ်မှာ အဓိက ထွက်ပေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းဟာ အောက်ဆီတိုဆင်ဖြစ်ပြီး ပွေ့ဖက်ခြင်း ဟော်မုန်းလို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ထိုဟော်မုန်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မာနတွေကို လျော့နည်းလာစေပြီး လူတွေကို ပိုယုံကြည်လာစေတယ်လို့ လီဗာပူး ဆေးရုံက ဒေါက်တာ Arun Ghosh ကဆိုပါတယ်။
ထိုဟော်မုန်းဟာ သံယောဇဉ်ဖြစ်တည်ခြင်းအတွက်လည်း အဓိကကျနေပြီး စာနာသနားစိတ် ကို များပြားလာစေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
ဒီ ဟော်မုန်းမျိုးဟာ ယောကျာင်္း ၊မိန်းမ မရွေး ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး အများဆုံး ထုတ်လုပ်သူတွေကတော့ မိန်းကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေဟာ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်တင်းနှောပြီးတဲ့နောက်မှာ မာနတွေခ၀ါချပြီး ချစ်ကျွမ်းဝင်မိသွားတာပါ။
ထိုဟော်မုန်းထွက်ရှိခြင်းက ပဲ ဆုံးခန်းတိုင်သည်အထိ သာယာကြည်နူးမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးသုခ မပြည့်ဝ တဲ့အခါမှာ နာကျင်တဲ့ ခံစားချက်တွေထွက်ပေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Originally published at -http://health.thithtoolwin.com/2015/12/blog-post_93.html